Faha-60 taon’ny THB : nosokafana tamin’ny lanonana niavaka ny fankalazana | NewsMada
Faha-60 taon’ny THB : nosokafana tamin’ny lanonana niavaka ny fankalazana
Taom-pankalazana ity 2018 ity, ho an’ny THB. Feno 60 taona amin’ity tokoa mantsy ity zava-pisotro misongadina indrindra amin’ireo vokatry ny orinasa Star ity. Nisy ny lanonana niavaka, nentina nanombohana ny fankalazana, ny alin’ny zoma teo, tetsy amin’ny Hôtel Panorama Andrainarivo.
Naka endrika lanonam-pianakaviana, nanehoana indray ilay « Soa ny fiarahantsika » ny fotoana. Vao niditra ireo nasain’ny fianakaviamben’ny orinasa Star dia notsenain’ny doboka ampongan-dry Tambour Gasy. Naneho sahady ny endriky ny lanonana tao anatiny izany, izay efa nohafanain’ny afon-dasy.
“Samy mandeha, samy mitady”. Hiran’i Jaojoby noforoniny efa ela, ahenoana ampahan-tononkira miresaka ny labiera novokarin’ny Star io. Tsy hadinon’ity mpanjakan’ny salegy ity tokoa ny nanao izany, nandritra ny fiakarana an-tsehatra nataony. Efa anisan’ireo ambasadaoron’ny THB rahateo i Jaojoby, ka rariny raha izy no niantoka ny fanafanana ny sehatra.
Niara-dalana tamin’izany, nanafana ny sehatra faharoa ry Princio, ho an’ireo nisafidy ny vazovazo amorom-patana. Anisan’ny fotoana tena nafana kosa ny fanapahana ny mofomamin’ny faha-60 taona, narahin’ny fiakarana an-tsehatra nataon’ireo mpanakanto namelona ny hira faneva vaovao, toa an-dry Dama, Ikala Vazo, Arione Joy, Vilon’Androy, sns.
Tao anatin’izay fetibe izay ihany koa no nandefasana ny afomanga, nanamarika fa ao anatin’ny fankalazana tanteraka ny rehetra. “Fanombohana ihany ny anio, fa mbola marobe ireo endrika fankalazana hotontosaina amin’ity taona ity”, hoy ny nambaran’ny tompon’andraikitra.